Ohere inweta akwukwo NCS - Gụọ nke a ka i tinye aka! - Element Society
Anyị na-atụ anya na gị / onye na-eto eto nwere oge dị ukwuu na anyị na NCS a n'oge okpomọkụ a ma ọ ga-amasị anyị ịhụ ka ị na-aga njem site na otu n'ime usoro mmemme anyị.
Nzukọ Ndị Ntorobịa Na-eto Eto nke Ntorobịa
Ụbọchị: 2nd October 2018
Oge: 6pm ruo 7pm
Location: Ụlọ Element, Arundel Street, S1 2NT
Info: Onye Ntorobịa Na-eto eto na-akpụ ihe niile anyị na-eme dịka ọrụ ebere! Ị ga-enyere atụmatụ atụmatụ oge NCS ọzọ, hazie ihe omume & mkpọsa nke ndị na-eto eto n'ofe obodo ahụ nwere ike itinye aka ma nyere aka ịmepụta obodo dị n'ofe site n'aka onye na-eto eto.
Otu esi edebanye aha: Gaa na nzukọ mmebata na chọpụta ihe ma ọ bụ email Gini na Richard.r@elementsociety.co.uk iji kparita uka banyere itinye aka.
Ndị isi na Nzukọ Ọmụmụ Ọzụzụ:
Ụbọchị: 3B Oketopa 2018
Oge: 6pm - 7pm
Info: Nkụzi a n'efu ga-ekpuchi modulu na Nduzi, Dynamics Team, Mmetụta Nghọta na Nkwurịta Okwu Di iche iche. Ọzụzụ a bụ iji nyere gị aka mgbe ị na-apụ n'ime ụwa ma bụrụkwa ụzọ mbụ ị ga-esi mee ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịrụ ọrụ na NCS n'ọdịnihu.
Element Champions Induction Nzukọ:
Ụbọchị: 4th October 2018
Info: Element Championship ga-enyere anyị aka ịkọsa okwu banyere NCs n'ụlọ akwụkwọ / mahadum dị na Sheffield. Anyị ga-enweta gị na hoodies na-akwado gị na ụfọdụ ọzụzụ n'efu na ị nwere ike inyere anyị aka iti mkpu banyere NCS ohere maka oge okpomọkụ 2019!
Otu esi edebanye aha: Bịanụ na nzukọ mmebata na ịchọpụta ihe ma ọ bụ email Ọgaranya na Richard.r@elementsociety.co.uk iji kparita uka banyere itinye aka.
Info: Anyị chọrọ ijide n'aka na onye ọ bụla gụsịrị akwụkwọ na NCS nwere ike ịlaghachi na mkparịta ụka na otu onye ọrụ anyị. Atụmatụ Mentor anyị dị iche iche na - agba gị ume ịbanye ma nwee onye ọrụ dịka onye nkụzi. Anyị abụghị ndị ọkachamara mana anyị nwere obi ụtọ na ị na-ele anya ngwa ngwa gị / CV ma ọ bụ na-akwado gị na ngwa ọrụ na ajụjụ ọnụ.
Otu esi edebanye aha: Email bara ọgaranya Richard.r@elementsociety.co.uk iji kparita uka banyere inweta ihe mmewere Mentor kenyere.
Info: Ọ bụrụ na a kpaliri gị ka ị nọgide na-eme ihe dị iche na obodo gị, ma ị maghị ihe ndị ọzọ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ohere a bụ maka gị! Anyị ga-enyere gị aka ịchọ ohere ndị ị nwere ike ịchọrọ ma na-akwado gị site n'ịbanye na ha.
Otu esi edebanye aha: Email bara ọgaranya Richard.r@elementsociety.co.uk anyị ga-ahazi gị ụbọchị / oge bara uru iji soro onye ọrụ na-ahụ maka ohere kwurịta okwu.